Man Utd, Chelsea, Arsenal iyo kooxo kale oo ku dagaallamaya saxiixa Muller – Gooldhalin
Bundesliga Horyaallada Premier league Serie A WARARKA
Man Utd, Chelsea, Arsenal iyo kooxo kale oo ku dagaallamaya saxiixa Muller
Bayern Munich xiddiggeeda Thomas Muller ayaa waxaa wada doonaya Afarta ugu sarreysa horyaalka England, waxaana la sheegayaa in uu dhammaad ku dhowyahay waayihiisii Allianz Arena, sida uu warinayo Sport Bild.
Premier League seddaxda kooxood ee ka dhisan Arsenal, Chelsea iyo Liverpool, oo lagu daray kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ee Juventus, waxay dhammaantood u heellanyihiin soo qaadashada Muller, haddii loo oggolaado in uu ka tago Bayern.
Si waliba macallin Carlo Ancelotti ayaa dafiray in uu laacibka meesha ka dirayo marba haddii uu soo qaatay James Rodriguez taasoo uu ku sheegay in soo qaadashada laacibkan aysan la macno aheyn in Bayern uu ka dirayo Muller.
Horay waxaa u xiiseyneysay Man Utd oo aysan jirin meel ay ku xaqiijisay in ay ka hartay xiisihii laacibkan.
Previous Previous post: De Sciglio oo ka degay Turin, si uu u dhammeystiro ku biirista Juventus
Next Next post: QISO YAAB BADAN! Waxaan Galmo iyo Raaxadii ugu macaaneyd la qeybsaday Xaas la qabo, mase Ogi xaalka Seygeedii!!!